Izikhangiso ekhasini lasekhaya? | Martech Zone
Izikhangiso ekhasini lasekhaya?
NgoLwesine, Novemba 22, 2007 NgoMgqibelo, Juni 27, 2015 Douglas Karr
Umbono ungokoqobo. Bengihlala ngikholelwa ukuthi, ngezinga elithile, ukuthi lokhu kuyiqiniso. Umbono wesisebenzi yiqiniso lokuthi hlobo luni lwenkampani noma umphathi abasebenzelayo. Umbono wemakethe yindlela isitokwe esiphendula ngayo. Umbono wamakhasimende akho ukuthi inkampani yakho iphumelela kangakanani.
Umbono wempumelelo yebhulogi ukuthi yenziwa kahle kanjani imali.
Njengoba ngiqalaza inetha, kukhona abanye ungakholelwa ekwenzeni imali ngebhulogi labo, Futhi abanye ukuthi do. Njengoba ngibona ngayinye yalezi zingosi iguqula izitayela zayo futhi ingeza ezinye izikhangiso, ukufundwa kwazo kukhule njengoba kwenza neholo lazo.
Ngabe ungakhetha i-ejenti yezindlu eqhuba iCadillac noma iKia?
Cishe cha. Umbono ungokoqobo. Yize isiza sami sisakhula ngempumelelo, bekuyisikhathi sokuthi ngenze okuthile ukuze ngiphumelele ezingeni elilandelayo. Izinkampani eziningi ziya kimi ukuzokhangisa kusayithi lami futhi bengingenalo igumbi, noma uhlelo olwanele lokugcina umkhondo walezo zikhangiso. Ngakho-ke - ngenze umsebenzi othile ngengqikimba.
Ngenze umsebenzi othile ocophele kakhulu esihlokweni, noma kunjalo. Bengifuna ukuhlinzeka ukubekwa okuhle yalezo zinkampani ezazifisa ukuxhasa isiza, kepha angifunanga ukuphazamisa okuqukethwe. Amabhulogi amaningi enza imali engiwabona empeleni vimba indlela yabafundi eya kokuqukethwe ngokukhangisa. Ngikholwa ukuthi lokho kuyaphazamisa futhi akudingekile. Ngokwami ​​ngiyakudelela ukupheqa ngezikhangiso zokuqukethwe, ngakho-ke ngisebenzise umthetho wegolide lapho ngisebenzisa izikhangiso kubhulogi lami.
Izikhangiso ziyi-125px ejwayelekile ngo-125px, indinganiso enhle kakhulu ezikhangisweni futhi etholakala ngobuningi ku Commission Junction futhi Qhafaza kabili. Lapho isikhundla singasetshenziswanga ngumxhasi wangempela, ngingasigcwalisa ngesikhangiso esivela kwenye yalezi zinsizakalo noma ngesikhangiso singenalutho.
Uma lokhu kukuthukuthelisa, ngiyethemba ukuthi angilahlekeli wena njengomfundi. I- RSS feed imvamisa iba nomxhasi oyedwa ezansi kwayo, kepha uzothola ukukhangisa okuncane kakhulu lapho. Ngicela wazi futhi ukuthi ngibajwayela njalo abakhangisi. Kuleli sonto ngithintwe ngumuntu obefuna ukungikhokhela kahle ukufaka isikhangiso. Lapho ngenza ucwaningo (aka: Google), ngathola ukuthi badelelekile kwi-Intanethi ngokubeka i-adware ne-spyware. Ngiyabazisa ukuthi ngeke ngiyisekele inhlangano esebenzisa izindlela ezikhohlisayo ezinjengalezi.
Inothi lokugcina, abangane bami bebelokhu bephawula 'ngobukhazikhazi' ekhanda lami. Omunye uthole kubi ngakho. Umbono ungokoqobo, ngakho-ke ngithathe isibhamu izolo kusihlwa ngekhamera yeMacBookPro iSight ngayifaka esithombeni ekhanda. Yile ndlela iningi lenu elingazi ngayo… ngibe mpunga futhi ngimamatheke!
Tags: indawo yesikhangisoIzikhangisoukukhangisaukukhangisa kwekhasi lasekhayaukukhangisa kwewebhu
Kuthiwani uma ama-Blogger eqhubeka no-Strike?
Nov 22, 2007 ngo-3: 12 PM
Ubukeka umuhle uDoug! Uqinisile, lezo zikhangiso aziphazamisi nakancane. Futhi, ngithanda isitayela esisha. Kusha kakhulu.
Nov 22, 2007 ngo-4: 52 PM
Imvamisa ngifunda ibhulogi yakho nge-RSS, kepha namuhla bekumele ngibheke ekwakhiweni kabusha.
Hmm… kimi manje ibukeka igcwele ngokweqile, futhi ikakhulukazi ukukhanya kwezikhangiso ze-flash kuyisicefe ekufundeni okugxile. Bahlale bezama ukudonsa ukunakwa embhalweni.
Ngenkathi ngingalwi nokwenza imali ngebhulogi, ngisekela ukunika umbhalo indawo yawo. I-whitespace ingumngani, hhayi into okufanele igcwaliswe ngezikhangiso.
Ngokuqondene nesithombe sakho, ngicabanga ukuthi singazuza ngokusebenza okuthile kwedijithali emnyama (aka. Photoshop noma okufanayo). Imibala ibonakala ibuthaka kancane, futhi kunokuthile okuxakile ohlangothini lwesokunene, okwenza ubuso bakho bubukeke bukhulu. Futhi kubonakala sengathi awubuki ngqo kwikhamera, icishiwe nje kancane. Ngokubambisana ne-airbrush emhlophe ezungeze ikhanda lakho, lokhu kunikeza i-eery, umuzwa onjenge-guru.
Ngingasithatha kabusha isithombe ngehembe elifana nesikimu sombala webhulogi yakho. Dubula lo mfanekiso ngelensi ende, nikeza okwehlukile. Mhlawumbe isibani esincane, ukuze ucwebezele emehlweni akho.
Nov 22, 2007 ngo-6: 08 PM
Happy Thanksgiving, uDoug. Ngiwuthandile umdwebo wakho wobukhazikhazi, kepha ngithanda nesibhamu esisha futhi, kukhombisa ukumamatheka kwakho. Ngiyayithanda ifomethi entsha, futhi. Ngingaziziba izikhangiso uma ngifuna, noma ngizibheke uma ngifuna, okufanele kube njalo.
Nov 22, 2007 ngo-10: 52 PM
Leyo impela inqubo enhle oyisebenzise lapha. Kungani ungasebenzisi i-adserver? Nginesiqiniseko sokuthi abakhangisi bakho bangakwazi ukulandelela ukuchofoza ngokwabo 🙂
Nov 23, 2007 ngo-12: 02 AM
Sawubona Doug, ngiyaxolisa ngaleyo vidiyo ekuphakeleni kwe-Google .. * oops *
Ngiyabona ukuthi unezikhala ezithile zesikhangiso ezitholakalayo. Yini abayenzayo? Ngidubule i-imeyili uma unethuba.
Nginevidiyo ezokwenzela iLOTI imali ethe xaxa kunentengiso yezincwadi kaJaime eyamvumela ukuthi awine i-Next Internet Millionaire.
Bheka lapho unethuba.
Sikufisela usuku oluhle lwe-Turkey!
Nov 24, 2007 ngo-11: 58 AM
Ikhasi lokukhangisa manje seliphezulu!
Ngizoqiniseka ukuthi ngiyayibamba le vidiyo, ngingumlandeli omkhulu webhulogi yakho.
Ngiyabonga! Futhi ngethemba ukuthi ube nesikhathi esihle samaholide!
Nov 23, 2007 ngo-11: 16 AM
Lokhu empeleni ukuvakasha kwami ​​kokuqala kusayithi lakho ngakho-ke angikwazi ukuphawula ngesakhiwo sakho sakudala. Ngiyasithanda isakhiwo sakho esisha, kepha sibukeka sisha futhi sihlanzekile ngaphandle kokukhangisa okuningi.
Angiqiniseki ngokuba nesithombe sakho kubhulogi yakho noma kunjalo. ngicabanga ukuthi kwenza kube okuhlangenwe nakho komuntu siqu uma abafundi bakho bekwazi ukubona ukuthi ungubani.
Ngiyethemba ukuthi ungagcwalisa izindawo zesikhangiso kukholamu yesobunxele kungekudala!
Nov 23, 2007 ngo-12: 35 PM
Sawubona Doug, ngicabanga ukuthi ukwakheka okusha kubukeka kukuhle. Angibanga nankinga nge "glamour shot" yakho endala, kodwa entsha nayo iyinhle.
Nov 23, 2007 ngo-5: 18 PM
Wenze izinguquko ezithile - ezinye bezisuselwa empendulweni:
I-Photoshopped umbala othile esithombeni.
Uthumele i- Ikhasi Lamanani Wokukhangisa
Into eyodwa okungenzeka ukuthi awuyibonanga ukuthi angizange ngisebenzise noma iyiphi indawo yebhulogi lapho ngakha lesi sakhiwo.
Eqinisweni, okuqukethwe uqobo kubanzi kancane. Ngimane ngandisa ububanzi besakhiwo samanje. Nginciphise nosayizi kanhlokweni ukuze abantu basheshe baqonde kokuqukethwe.
Ngiyabonga ngokungazisa ukuthi ucabangani!
Nov 24, 2007 ngo-7: 41 AM
Kungahle kungasho lukhulu kuwe, kepha ungilahlekele njengomfundi. Kudala ngizizwa ngikhululekile ngokuthengiswa njalo kwewebhu namabhulogi ngokujwayelekile futhi ngicabanga ukuthi sekuyisikhathi sokuthi ngiqale ukuhlukanisa ubuhlobo bami naleyo ngxenye ye-intanethi. Ngakho-ke, yebo, usale kahle ngicabanga; Ngikujabulele ukuhlala kwami ​​lapha, kepha njengamanje ngizwa ukuthi intelezi iminyaniswe yinqwaba yezicelo zokucela imali. (Futhi, eceleni; izikhangiso ezigelezayo ze-Content Link kufanele zibe ngenye yezindlela ezimbi kakhulu zokukhangisa ezake zasungulwa)
Nov 24, 2007 ngo-11: 56 AM
Ngiyabonga ngokungazisa futhi ngiyaxolisa ukuthi uyahamba. Angincengi noma ngubani ukuthi anginike imali, kepha angicabangi ukuthi kuyisono ukunikeza izeluleko ezingaka mahhala futhi ngizame ukwenza imali ngebhulogi ngokugcwele.
Ngicabanga ukuthi abanye abantu bacabanga ukuthi ngicebile noma okuthile okususelwa empumelelweni yebhulogi yami. Njengobaba ongayedwa wababili, noyedwa ekolishi, ngiyakuqinisekisa ukuthi angiyena. Ngisigaba esiphakathi esiqinile, anginalo ikhaya (okwamanje), futhi ngisebenza kanzima ukugcina imali yokonga. Uma ngingathola amadola angamakhulu ambalwa ngaphezulu kubhulogi yami inyanga ngayinye, ngeke isetshenziswe emakhaya eholide noma ezimotweni zikanokusho… kuzokwenza ukukhokha ikolishi lendodana yami kube lula kancane.
Siyabonga ngokulenga lapho nje unakho!
Nov 24, 2007 ngo-5: 08 PM
Ngivumelana nawe ngalolu doug. Angiqondi ukuthi abantu abanjengoMyk bangalindela kanjani amabhulogi namanye amawebhusayithi ukuthi ahambise okuqukethwe okuwusizo kangaka ngaphandle kokwenza izinzuzo ezimbalwa.
Uma unguJohn Chow yinto eyodwa leyo - nakanjani uhambe ngokweqile ngezinye zezikimu zakhe zokwenza imali. Kepha njengoba usho emazwaneni akho ngaphezulu kukaDoug, ungubaba osezingeni eliphakathi (njengami) uzama ukufaka indodana yakho ekolishi. Ngiqonda ngokuphelele futhi ngiyasihlonipha isifiso sakho sokwenza imali encane kubhulogi yakho. Ngakho konke okuqukethwe okuhle okunikeze abafundi bakho, ufanele okungenani lokho okungako.
Nov 25, 2007 ngo-4: 41 AM
Okokuqala, uBrandon, abantu abanjengoMyk - boooh.
Bengizikhulumela mina ngedwa, ngakho-ke ngicela ungangenzi ngibukeke sengathi ngenza izitatimende ezijwayelekile.
Kulowo nalowo kwaba yilokho ebengizama ukukusho. Kepha uyazi, nami ngivunyelwe ukukhetha ukuthi yimaphi amaBlogs engiwafundile nokuthi yini engingayifundi, futhi ngazise uDouglas ukuthi kungani.
Okokugcina, bengizokhetha i-Agent estate engingangibuzi ukuthi ngike ngazama umkhiqizo wakamuva we-mouthwash, noma ngabe bengiyizwile le sausage emnandi ngempela ngenkathi uzama ukungithengisela indlu - kodwa, futhi, lokho kumane kuyintando yomuntu siqu.
(Nami ngingubaba, futhi njengamanje ngedwa oletha imali ekhaya, ngakho-ke angiphikisani nokuhola imali, ngiyangabaza nje ukuthi le yindlela efanele ngempela.)
Nov 25, 2007 ngo-6: 48 AM
Kuzofanele nginamathele kuDoug lapha; usho ukuthi uyangabaza ukuthi ukukhangisa kuyindlela efanele yokwenza imali engenayo ngokususelwa kwimizamo ebalulekile uDoug ayitshala kubhulogi lakhe, kepha awunikeli iziphakamiso ngenye indlela yokwenza imali. Ngakho-ke ngikuphonsela inselelo Myk; uma le akuyona indlela eyiyo kanjani ngokusikisela kuDoug indlela 'elungile', futhi esebenza kahle ngokwezimali?
Nov 25, 2007 ngo-6: 50 AM
I-PS engivame ukuyithola ihlekisa ngokudabukisayo lapho abantu bekhononda ngalezo zinto abazinikwa mahhala. FWIW.
Nov 25, 2007 ngo-7: 06 AM
Uyabona, Mike, ngiyawuphikisa umbono wokuthi amabhulogi kufanele abe nesu lokwenza imali kube bonke. Ngiyaxolisa, kunjalo nje nakimi. Akunakusiza ekuphikiseni leli phuzu ngempela.
Futhi ngiyethemba ukuthi angizange ngithole sengathi ngiphakamisa ukuthi uDoug kufanele ashintshe okuthile kwami. Akufanele. Kufanele enze lokho acabanga ukuthi kuyinto efanelekile wakhe ibhulogi.
Futhi ngokufanayo, kufanele ngibe nelungelo lokukhetha ukuyithanda; noma cha, njengoba kunjalo lapha.
Mhlawumbe ukuphawula kwami ​​kutholakale njengokumlahla, uqobo. Okungekhona ebengizama ukukwenza. Yiqiniso, angiyithandi indlela amasu okwenza imali bathuthele phambili kubhulogi. Manje-ke, uma kuyindlela le bhulogi ezohamba ngayo, kulungile. Akusikho nje engikufunayo kubhulogi futhi ngicabanga ukuthi nginelungelo lokwenza ngokuvumelana nemizwa yami.
Ngokuqondene nokuphonsela inselelo kwami. Well ... ake sibone. Ngicabanga ukuthi kubalulekile ukwazi, ukuthi angiyena omunye wabantu abafuna izinto mahhala. Angiwulandi umculo, angilandi ama-movie.
Lokho kusho. Ngingakujabulela ukukhokha imali yokubhalisa yale bhulogi (ngaphandle kwalapho ikhona, njenge- $ 300 ngenyanga). Manje, ngiyaqonda ukuthi kuzoba nebutho labantu abamemezayo akunakwenzeka ngoba i-inthanethi futhi imahhala.
Yebo. Yonga mahhala yezikhangiso ezicasulayo kanye nama-poplink we-texlink wezinto Angizelanga lapha.
Ingabe zikhona izikhangiso ezincwadini ozifundayo?
Angizithandi izikhangiso ku-TV-Series yami. Yingakho ngithenga ama-DVD. Angithandi ukuhlala phakathi kwesigamu sehora lezikhangiso ngaphambi kokuba i-movie iqale, yingakho ngithenga iDVD.
Ngiyavuma hhayi kholelwa kuyo yonke into yamahhala ngezindleko zokucima ibhulogi yakho ngezikhangiso ezimbi ezivela eceleni.
I am ukulungele ukusebenzisa imali. Kuphela i-I´d kungcono ngiyinikeze ngqo uDoug esikhundleni sokudlula ngandlela thile "chofoza iziteshi".
Nov 25, 2007 ngo-10: 59 AM
Ngempela ngiyazwelana nombono wakho futhi ngiyakwazisa ukwethembeka kwakho. Lapho abantu abanjengoFacebook neYouTube beqala inqubo yokwenza imali, ngiqala ukukhipha amehlo ami.
Angizukuphikisa ukuthi ngandlela thile 'yehlukile' ngoba yibhulogi yami - ngivele ngibheke phambili ukuthi a) ingakhiqiza imali eningi futhi ngiyisebenzise! futhi b) Ngicabanga ukuthi kunombono ngamabhulogi okwenza imali ukuthi 'aphumelele'.
Inothi lokugcina: Inkinobho yami ethi “Ngithengele i-Starbucks” kungenzeka ingenze cishe ama- $ 25 ezinyangeni eziyisithupha ezidlule - ngakho-ke imizamo yami yokwenza imali ngqo ivele yaba yiflop. 🙂
Ngithemba ukuthi uhlala uzungeze - uzongeza okuningi ezingxoxweni lapha!
Nov 25, 2007 ngo-1: 38 PM
Myk, bengingazami ukuhlasela, angiqondi nje isimo "sento engelutho".
Nov 25, 2007 ngo-3: 31 PM
@Myk: Uyabona, Mike, ngiphikisana nomqondo wokuthi amabhulogi kufanele abe nesu lokwenza imali nhlobo. Ngiyaxolisa, kunjalo nje nakimi. Akunakusiza ekuphikiseni leli phuzu ngempela.
Ngeke ngiphikisane. Kungumbono wakho futhi yimi okholelwa ukuthi unelungelo lawo. Vele ngicabanga ukuthi awunangqondo, futhi ngokufanayo nginelungelo lalo mbono, kepha zombili ziyimibono futhi azilutho okufanele zilwisane ngazo, akunjalo? 🙂
@Myk: Zikhona izikhangiso ezincwadini ozifundayo?
Yebo, babizwa ngokuthi “Omagazini.” 🙂
Okuxakayo ukuthi izolo bengicwaninga ukukhangisa komagazini ngithole ucwaningo ku-agazini.org ekhombisa zonke izibalo ezibonisa ukuthi abafundi abaningi bamamagazini babheka izikhangiso njengezinto ezibalulekile kumagazini, ikakhulukazi uma lezo zikhangiso ziqondiswe kubufundi.
@Angizithandi izikhangiso ku-TV-Series yami. Yingakho ngithenga ama-DVD. Angithandi ukuhlala phakathi kwesigamu sehora lezikhangiso ngaphambi kokuba i-movie iqale, yingakho ngithenga iDVD.
Uqhathanisa ama-apula namawolintshi ngezindlela eziningi. Ngingakutshela ukuthi ungazithandi izikhangiso ngoba nje uthambekele ekungazithandi, kepha abantu abaningi abazithandi, njengami, ngoba izikhangiso ze-TV zibeka kakhulu isikhathi sazo. Izikhangiso zebhulogi azithandeki kangako kunalokho futhi (ngaphandle kwezikhangiso ezivelayo) azimoshi isikhathi sabantu, ngaphandle kwalabo bantu abakhetha ukuchitha isikhathi sabo bezikhalela. '-)
@Myk: Angikholwa kokukhululekile yonke into ngezindleko zokusika ibhulogi yakho ngezikhangiso ezimbi ezivela eceleni.
Kahle ama-blog amaningi: “Ngaphandle kwalokho uNkk. Lincoln, bekunjani ukudlala?”
@Myk: Ngikulungele ukusebenzisa imali. Ngingathanda kuphela ukukunika ngqo uDoug esikhundleni sokudlula ngandlela thile? Chofoza iziteshi?.
Ukuqagela kwami ​​ukuthi usembalwa kakhulu. Uma kungenjalo, kungakuhle ukuthi uDoug namanye ama-blogger bathuthukise ingqalasizinda edingekayo ukusekela inketho enjalo, kepha kuzofanele kube inketho ngoba impela ngaphezulu kuka-90% ngeke kukhokhe. Ngiyangabaza ukuthi kukhona abantu abenele abenza ukuthuthuka kwengqalasizinda okunenzuzo, kepha ngingahle ngibe nephutha futhi angizifaki neze ukuvimba into ebifunwa omunye umuntu.
@Myk: Yiqiniso, angithandi indlela amasu okwenza imali asethuthele ngayo phambili ekubhulogiseni. Manje-ke, uma kuyindlela le bhulogi ezohamba ngayo, kulungile. Akusikho nje engikufunayo kubhulogi futhi ngicabanga ukuthi nginelungelo lokwenza ngokuvumelana nemizwa yami… .Ngingakujabulela ukukhokha imali yokubhalisela le bhulogi (ngaphandle kwalapho ifana ne- $ 300 ngenyanga). Manje, ngiyaqonda ukuthi kuzoba nebutho labantu abangamemezi neze ngoba liyi-inthanethi futhi likhululekile.
Unelungelo lokuthatha isinyathelo ngemizwa yakho, inqobo nje uma izenzo zakho zisemthethweni! (ngokwesibonelo, ukuqhumisa umlilo endlini kaDoug bekungeyona indlela efanelekile yokwenza ngaleyo mizwa. kwento ebiguquka futhi manje lokho sekuguqukile awukuthandi noma ngabe ukuhlala kwayo ngendlela eqale ngayo akunangqondo.
Umlando unezibonelo eziningi zabangachazwanga, futhi bonke baba yimibhalo yaphansi emlandweni. Isibonelo, kukhona labo ababewazonda ama-CD ngoba bekhetha i-vinyl, kepha ukunganeliseki kwabo akuzange kuvimbele ngokuphawulekayo ushintsho kumculo ofakwe ngekhompyutha. Okufanayo nalabo abazonda ukukhangisa kumabhulogi ngeke babangele ukuthi amabhulogi abuyele emuva abe mahhala; ukubhuloga kuyinkinga enkulu yokwenza kahle (ngiyazi, ngizamile futhi angikwenzi kahle!) ukuthi abantu badinga isisusa sezomnotho ukukwenza kahle. Futhi unikezwe konke okunye ukukhetha umfundi anakho, amamodeli okubhaliselwe awasebenzi kepha amamodeli wokukhangisa ayasebenza. Ngisho neNew York Times isithuthele kwezokukhangisa; I-NYT ithole ukuthi ukunakwa kubaluleke kakhulu kunokuvikela: http://www.mikeschinkel.com/blog/attentionhasbecomeworthmorethanprotection/ (Kepha ungahle ungafuni ukulandela isixhumanisi ngoba nginezikhangiso ekhasini.)
Noma kunjalo, iphuzu elisemqoka engxoxweni yami ukuthi ukungazithandi kwakho izikhangiso kuthinta wena kuphela (nalabo abanemizwa efanayo) futhi kukuthinta kabi; IOW uwena okhululeka emizweni okhetha ukuba nayo. Kunesisho esidala esithi “Indoda yakhahlelwa yimpisi. Wawucubungula lo mthombo waqhuba ibhizinisi lakhe. ” Ungasetshenzelwa phezulu mayelana nezikhangiso ezikumabhulogi bese uzilethela ubuhlungu benhliziyo, noma ungamukela nje.
Uthe “Ungaliphikisi iphuzu” ngakho-ke mhlawumbe ucabanga ukuthi ngiphikisana nephuzu kodwa angilona. Ngikhuluma ngendaba yokuphatheka kabi ngento ethile eguqukile futhi engeke iguquke ibuyele endleleni endala nokuthi lokho kulinciphisa kanjani ngempela ngempela izinga lempilo lomuntu ocasukile. Ngakho-ke ngamafuphi, uma ufunda ukwamukela lokhu kuziphendukela kwemvelo, uzoba umuntu ojabule ngokwengeziwe.
Nov 24, 2007 ngo-4: 07 PM
Ngisuse nomkhangiso omude phezulu kwamakhasi wami owodwa, ngathola isikhala esithe xaxa ezikhangisweni zamanje!
Nov 24, 2007 ngo-9: 07 PM
LOL! Okuthunyelwe kwakho kuzwakala sengathi okwakho kuzama ukubeka isikhundla sakho ngokuncane kakhulu! '-) Ukwenza into enkulu kangako kumane kudonsela ukunakekela eqinisweni. Yenza nje bese uqhubeka. Uma abantu befuna ukukhuza ngakho, kahle-ke leyo yinkinga yabo.
I-BTW, ngincamela ukusebenzisa umnikazi we-Kia ukuthola umthengisi wezezakhiwo; Ngingabona ukuthi babenethuba elingcono lokuziphatha kahle. Ngaphandle kwalokho, ngubani oshayela iCadillac namuhla onesigaba esithile vele? Yebo, lokho ngaphandle kukaKate Walsh… '-)
Nov 24, 2007 ngo-10: 02 PM
Impela, Mike. Impela bengifuna ukuthethelela izikhangiso - esikhathini esedlule bengivame ukugxeka abantu abakhangisa izikhangiso kulo lonke ikhasi labo lasekhaya. Kodwa-ke ngenze ukunakekelwa ekubekweni kwale timu.
Angicabangi ukuthi kunobudlelwano phakathi kwenzuzo nezimiso zokuziphatha - futhi ngiyayithanda i-CTS entsha futhi ngingathanda ukuyishayela eyodwa… kodwa kuzothatha iminyaka embalwa ngaphambi kokuthi ngichithe imali ngemoto kanokusho - uma kungenzeka.
Nov 24, 2007 ngo-10: 33 PM
Eshu, ngiqonde ukuthi “hlaziya”Hhayi“vumela'… (Doh! 🙂
Ngokuqondene nenzuzo nokuziphatha, mhlawumbe bengimane ngigxeka umbono wami wenkolelo yokuthi "izinwele eziluhlaza okwesibhakabhaka eCadillac”Kancane kakhulu (ukucaphuna kuthathwe endaweni yesikhangiso somsakazo wasendaweni mayelana nabathengisi bezindlu abaningi.)
Noma kunjalo, ibhulogi enhle (ngaphandle kwalokhu okuthunyelwe '-p)